ရှရီယာဥပဒေ - မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများနဲ့ မွတ်စလင်မ်များပါ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက် ~ The Ahmadi Post : Myanmar
ရှရီယာဥပဒေ - မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများနဲ့ မွတ်စလင်မ်များပါ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်
ရှရီယာဥပဒေဆိုတာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များရဲ့ ကျမ်းစာတော်၊ ကုရ်အာန်က တင်ပြတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပါ တယ်။ “သီတာရေစဉ်လို ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ဘ၀လမ်းညွှန်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဟီဗရူးဘာသာစကားနဲ့ လာရှိတဲ့ ဂျူးများရဲ့တိုရာကျမ်းစာကို မူရင်း root word အရ “Yarrah (ယာရ်ရာဟ်)” လို့ခေါ်ပါတယ်။ ယာရ်ရာဟ်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှရီယာနဲ့ ထပ်တူညီစွာ တူညီနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှရီယာဥပဒေဟာ အေဗရာဟင်မိခ် သာသနာတွေလို့ခေါ်တဲ့ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ် စသည်များမှာ အံဝင်ခွင့်ကျ မြစ်ဖျားခံထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ရှရီယာဥပဒေဟာ အဓိကအားဖြင့် ကဏ္ဌခွဲငါးခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ၊ အတွင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ အပြုအမူတွေအတွက်က “အဒ္ဒါးဘ်” (adab)၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ဖို့အတွက် ဝတ်ပြုဆည်းကပ်ဖို့ရန်က “အေဘာဒါဟ် (ibadah)” ၊ “အစ်သီကာဒတ် (I’tiqadat)” လို့ခေါ်တဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ၊ “မူအာမလတ်(mu’amalat)” လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေအတွက် နည်းနာနိဿရစည်းကမ်းများ၊ “ဥကူဘာသ် (‘uqubat)” လို့ခေါ်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကိုင်းအခက် ၅ ခုကို လူသားထုတစ်ရပ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူစုအတွက် တရားမျှတမှု (justice)၊ အမျိုးမတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူသားအချင်းချင်း နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်မှု(pluralism)၊ သာတူညီမျှရှိမှု (equity) စတာတွေကို အဲဒီလူစုမှာပါဝင်နေတဲ့ လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးအချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရှရီယာဥပဒေက သဘောတူနှစ်မြို့ခြင်းမရှိတဲ့ အအုပ်ချုပ်ခံဆီကို အတင်းအကျပ်အကျိုးသက်ရောက်စေဖို့ ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာ - လူတစ်ယောက်က မွတ်စလင်မ်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာ နေထိုင်နေမယ်ဆိုရင်တောင် သူ့အနေနဲ့ တစ်ခုခုကို အဆုံးအဖြတ်ခံယူမယ်ဆိုရင် သာမာန်ဥပဒေ (secular law) သို့မဟုတ် ရှရီယာဥပဒေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ပေးရပါတယ်။
ရှရီယာဥပဒေဟာ ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားရှိပြီး နှစ်မြို့ကျေနပ်စွာ အဆုံးအဖြတ်ခံယူလိုသူများ အတွက်သာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ အစိုးရအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြားနည်းတစ်ခုခုအားဖြင့်လည်းကောင်း အင်အားသုံးပြီး အတင်းအဓမ္မလိုက်နာ နာခံဖို့ ပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါ။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကို လက်မွန်မဆွ အုတ်မြစ်ချတည်ထောင်တော်မူခဲ့တဲ့ မဟာတမန်တော်ကြီး မုဟမ္မဒ် (သခင့်အပေါ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာ ကျရောက်ပါစေ) ဟာ မိမိကိုယ်တော်တိုင် ဖော်ပြပါစံနမူနာကို လက်တွေ့ပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာက နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရပုံစံတစ်ရပ်ကို သီးသီးသန့်သန့်ပြဌာန်းပေးထား တာမျိုးမရှိပါ။ သို့သော် ကုရ်အာန်ကျမ်းစာက "absolute justice " လို့ခေါ်တဲ့ လုံး၀ဥဿုံ တရားမျှတမှုကို အခြေခံပြီး အဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ပါဝင်နေသူအားလုံးက (ခေါင်းဆောင်ကို) ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ ပုံစံ လိုအပ်ကြောင်း၊ အဲလိုပုံစံကို အဒလ် (adl) လို့ခေါ်ဆိုကြောင်း လမ်းညွှန်ပါတယ်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က တင်ပြတာက -
[16:91] Verily, Allah enjoins justice, and the doing of good to others; and giving like kindred; and forbids indecency, and manifest evil, and wrongful transgression.
မလွဲဧကန်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တရားမျှတရန်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများအား ကောင်းကျိုး ပြုရန်လည်းကောင်း၊ ဆွေးမျိုးနီးစပ်တို့အား ပေးကမ်းရန်လည်းကောင်း၊ နှစ်သက်လိုလားတော်မူပေ သည်။ ထိုမှတစ်ပါး ထင်ရှားစွာသော စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်များမှလည်းကောင်း၊ မကောင်းမှုများမှ လည်းကောင်း၊ မတရားသော ကျူးလွန်ဖောက်ပြားမှုများမှလည်းကောင်း မြစ်တားတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် ၁၆.၉၁)
အထက်ပါမုက္ခပါတ်တော်မှာ အထူးသတိချပ်ရမှာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာသာသနာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကို လုံး၀ဖော်ပြထားတာမျိုး မရှိပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီလူက မွတ်စလင်မ်မို့ သူ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံ၊ ဒီလူကတော့ တခြားဘာသာဝင်မို့ သူ့ကို ခွဲခြားဆက်ဆံဆိုတာမျိုး လုံး၀မရှိပါ။ ဒါကြောင့် လုံး၀ဥဿုံတရားမျှတညီမျှစွာနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်ကြဖို့ဆိုရာမှာ ဥပမာပေးနိုင်တာက ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်လှတဲ့ ဂျူးဘုရင်ကြီး ဆော်လမွန်လို ဘုရင်ဦးစီးစနစ်မှာတောင် မျှတညီမျှစွာ အုပ်စိုးဖို့ပါ။ ဒီဂျူးဘုရင်ကြီး ဆော်လမွန်ကလည်း ရှရီယာဥပဒေသရဲ့ အခြေခံနည်းနာတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သူပါ။ ရှရီယာရဲ့ အခြေခံနည်းနာကတော့ တရားမျှတမှုပါ။
၂. မွတ်စလင်မ်တွေက သူတို့နေထိုင်ရာ (မွတ်စလင်မ်မဟုတ်တဲ့) တိုင်းပြည်မှာ ရှရီယာဥပဒေပြဌာန်း ပြီး လူတန်းစားအားလုံးကို အုပ်ချုပ်စေဖို့ အလိုရှိပါသလား။
မရှိပါ။ သတိထားရမှာက Religion ဆိုတဲ့ ဘာသာသာသနာရေးက State ဆိုတဲ့ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စမှာ တစ်စုံတစ်ရာပါဝင်ပတ်သတ်ခြင်းမရှိဖို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာက သွန်သင်ပါတယ်။ ရှရီယာဆိုတာ ဘုရားရှင်နဲ့ လူသားတို့အကြား ပုဂ္ဂလအဆက်အသွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဟာတမန်တော်ကြီး မုဟမ္မဒ်ဟာ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ရှိနေစဉ်၊ မဒီနာကိုဓဥပဒေ (Charter of Medina) ကို ရေးဆွဲပြဌာန်းတဲ့အခါ မွတ်စလင်မ်တွေကို ရှရီယာဥပဒေ၊ ဂျူးတွေကိုတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် တိုရာဟ်ဥပဒေနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရန် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှရီယာဥပဒေနဲ့ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရမယ်လို့ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုတောင် ပြဌာန်းခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အဲဒီလို မပြဌာန်းမသတ်မှတ်ရတာကလဲ ရှရီယာဥပဒေကိုယ်တိုင်က compulsion လို့ခေါ်တဲ့ အတင်းအကြပ်အဓမ္မမှုကို တားမြစ်ထားလို့ပါ။ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြထားတာက -
"There is no compulsion in religion" (2:257)
သာသနာရေး၌ အတင်းအဓမ္မအနိုင်အထက်ပြုခြင်း အလျဉ်းမရှိစေရ။ (ကုရ်အာန် ၂.၂၅၇)
ဒါ့ပြင် ရှရီယာဥပဒေက မိမိနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာစောင့်သိကြဖို့ မွတ်စလင်မ်တိုင်းရဲ့ တာဝန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြဌာန်းပါတယ်။ ဒီတော့ကား မြန်မာပြည်နေ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်သာသနာဝင် မွတ်စလင်မ်များဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေကို အပြည့်အ၀လိုက်နာ နာခံရပါမယ်။
၃. မွတ်စလင်မ်တွေက ရှရီယာကို နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအဖြစ် မလိုလားဘူးဆိုရင် ရှရီယာဥပဒေကို တရားရုံးတွေမှာ (မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံသားများကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချတဲ့အခါ) ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကော
ပထမဆုံး သတိပြုရမှာက ရှရီယာဆိုတာ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးနဲ့ သူ့ရဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်တို့အကြား ပုဂ္ဂလအဆက်အသွယ်ကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးတဲ့ ဥပဒေပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမအကြိမ် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ (First Amendment) မှာ ဘာသာသာသနာလွတ်လပ်စွာ ခံယူကျင့်သုံးခွင့်ကို တားမြစ်တဲ့ဥပဒေ၊ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးဥပဒေအား တသီးပုဂ္ဂလကျင့်သုံးခြင်းကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေမျိုး၊ ကွန်ဂရက်မှာ မကျင့်သုံးဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ထို့အတူ မြန်မာ့ဥပဒေကလည်း လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာသာရေးခံယူချက်ကို လုံး၀လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိနေစေဖို့ ပြဌာန်းပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ချက်က အကယ်၍ ရှရီယာကို တရားရုံးတွေမှာ ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဆိုပါတော့။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ (အခြားဘာသာဝင်များ အများစုနေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွေက) မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အစ္စလမ့် လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ အမွေခံခြင်း၊ သေတမ်းစာရေးခြင်းနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခြင်း စတာတွေကို မပြုလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ တူညီတဲ့ ကန့်သတ်ချက်မျိုးကို ခရစ်ယာန်နဲ့ ဂျူးဘာသာဝင်တွေအတွက်ပြဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကမှ မင်္ဂလာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးနိုင်မှာမဟုတ်၊ သေအံ့ဆဲဆဲ လူနာကို ဘယ်ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးကမှ last rites ခေါ် ဆုတောင်းစာကို ရွတ်ဖတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်၊ ဂျူးဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဘယ် ရဗ္ဗီတစ်ယောက်ကမှ မွေးကင်းစ ယောက်ျားကလေးကို အရေးပြားလှီးမင်္ဂလာပြုပေးနိုင်တော်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဖော်ပြပါ ဆောင်ရွက်ပြုမူချက်တွေကို ဂျူးနဲ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ဘာသာရေးဥပဒေတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားလို့ပါ။ ခုလက်ရှိ အမေရိကန်မှာ တရားဝင်နေတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာတောင် အမေရိကန်လူမျိုး ဂျူးဘာသာဝင်တွေဟာ လောကီရေးကိစ္စ (Civil matters) တွေကို ဘတ်ဒင်း (Beit Din) ခေါ် ရဗ္ဗီ (ဂျူးဘုန်းတော်ကြီး) ဦးစီးတဲ့ တရားရုံးတွေမှာ အဆုံးအဖြတ်ခံယူနေကြ တုန်းပါ။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ၊ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ နိုင်ငံ့အခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ အယူဝါဒရေးရာ လွတ်လပ်စွာခံယူကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ကို အလိုရှိပါတယ်။
၄. ရှရီယာဥပဒေက တခြားဘာသာသာသနာတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘယ်လိုများ ပြောထားပါလဲ
ရှရီယာဥပဒေက သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမှာ လုံး၀ဥဿုံလွတ်လပ်မှု(freedom of conscience) ကို ပြဌာန်းသလို သာသနာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ပေးထားဖို့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းပါတယ်။ ဥပမာ - ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်က ဂျူးတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေနဲ့ အခြားဘာသာသာသနာဝင်များကိုယ်စား ခုခံကာကွယ်ပေးဖို့ မွတ်စလင်မ်များကို (မပြုမနေရတာဝန်တစ်ရပ်အဆင့်မျိုးထိ) ပြဌာန်းထားပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်များဟာ ချာခ်ျဘုရားကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးတွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအပါအဝင် သာသနာနိကအဆောက်အအုံတွေကို အကာအကွယ်ပေးရာမှာ ပါဝင်ကြဖို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်က ပြဌာန်းပါတယ်။ (ကုရ်အာန် ၂၂.၄၁ ရှု) ဒါ့ပြင် ကုရ်အာန်က မွတ်စလင်မ်များကို ရှေးယ္ခင် (အစ္စလာမ်က ယေရှု၊ မောရှေ၊ အေဗရာဟင်မ်၊ ခရစ်ရှနားနှင့် ဗုဒ္ဓတို့အား ဘုရားရှင်၏ တမန်တော်များအဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံထားတာနဲ့နည်းတူ) တမန်တော်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ ယေရှု၊ မောရှေ၊ အေဗရာဟင်မ်၊ ခရစ်ရှနားနှင့် ဗုဒ္ဓတို့အား သစ္စာဝါဒီ မှန်ကန်သူ၊ အလင်းပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအဖြစ် သက်သေခံကြဖို့ရာ သတ်မှတ် ပြဌာန်းပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို နောက်လိုက်ပြုကြတဲ့ (အခြားဘာသာဝင်များ ကိုလည်း) လေးစားခြင်းပြုရန် သတ်မှတ်ပြဌာန်းပါတယ်။ တမန်တော်မဟာ မုဟမ္မဒ်သခင်က အာရေဗျကျွန်းဆွယ်ရဲ့ အုပ်စိုးသူဖြစ်လာတော့ သခင့်ရဲ့ မူလဘူတရည်ရွယ်ချက်က မိမိအုပ်ချုပ်ရာ ဒေသနယ်ပယ်မှာ ဘာသာသာသနာပေါင်းစုံ (ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်နှင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်သူ) က လူတန်းစားအသွယ်သွယ် ငြိမ်းချမ်းအေးဆေးစွာ အတူတကွ ကိုင်းကျွမ်းမှီကျွန်းကိုင်းမှီ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့၊ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ခြင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းအေးဆေးစေဖို့၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကင်းဖို့ စတာတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၅. အအုပ်ချုပ်ခံလူတွေကို ဖိနှိပ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ရှရီယာဥပဒေကျင့်သုံးနေတာပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်ရော၊ ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိပါသလဲ
အဲဒီနိုင်ငံတွေကတော့ ရှရီယာကပြဌာန်းတဲ့ အစစ်အမှန်အခြေခံအချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ တရားမျှတမှုကို လျစ်လျူပြုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှရီယာကို ခုတုံးလုပ်အသုံးချပြီး အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုကို ရှေ့နေလိုက်ပေးဖို့ မှားယွင်းစွာဆောင်ရွက်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်အကန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှရီယာအစစ်အမှန်ကို ကျင့်သုံးနေတဲ့ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရယ်လို့တောင် မရှိပါ။ အချက်အလက်တွေအရပြောကြကြေးဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မွတ်စလင်မ်တိုင်းပြည်လို့ ထင်နိုင်တာ အမေရိကန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အမေရိကန်က ရှရီယာဥပဒေသရဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ လွတ်လပ်စွာဟောပြောတင်ပြခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြပိုင်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ပေးထားလို့ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်ကို ရှရီယာဥပဒေကျင့်သုံးနေတာပါလို့ ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ နိုင်ငံများကတော့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြွေးကြော်မှုထဲမှာပဲ သူတို့အတွက် တရားမျှတနေကြမှာပါ။ သူတို့ပုံစံကဘိုင်ဘလ်သမ္မာ ကျမ်းကို အခြေခံပြီး ကျွန်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကြွေးကြော်တဲ့ အလုပ်ရှင်လိုပဲဖြစ်နေမှာပါ။
အစွန်းရောက်တွေနဲ့ ဝေဖန်နေကြသူတွေ အမြဲမြဲလိုလို ဆွဲငင်ယူသုံးနေကြတဲ့ (သူတို့ကတော့ ဆူပူသောင်းကျန်း ခိုက်ရန်ပွားမှုတွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့ မုက္ခပါတ်များလို့ ဆိုကြပါတယ်။) ကုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲက မုက္ခပါတ်တွေအတွက် အကြံပြုလိုတာက အဲဒီမုက္ခပါတ်တွေကို ရိုသားပြီး တရားဝင်တဲ့ အကျယ်ဖွင့်ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအား ဖြင့်သာလျှင် အစ္စလာမ့်ဥပဒေကို အပြည့်အ၀နားလည်မှာပါ။ အစွန်းရောက်တွေနဲ့ ဝေဖန်ရေးသမားတွေကတော့ ဒီလို ကုရ်အာန်ကျမ်းစာအကျယ်ဖွင့်ရေးမှာ အခြေခံနည်းနာကို လိုက်နာပေးဖို့တောင် ငြင်းဆန်နေကြတာက သူတို့အဖို့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှချက်တစ်ခုပါ။ ပေါင်းချုပ်လို့ တင်ပြရရင်တော့ ရှရီယာဥပဒေဆိုတာ မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်တို့အကြားပုဂ္ဂလအဆက်အသွယ်ပြုနိုင်ဖို့ နည်းဥပဒေပါ။ ဓမ္မသစ်နဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေက ခရစ်တွေ၊ ဂျူးတွေကို သူတို့ဘုရားရှင်နဲ့ ပုဂ္ဂလအဆက်အသွယ် ပြုနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းပေးသလိုပါပဲ။ “သီတာရေစဉ်လို ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ဘ၀လမ်းညွှန်” ဖြစ်တဲ့ ရှရီယာဥပဒေမှာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာ အချက်တစ်ချက်မှ ပါဝင်မနေပါ။
Qasim Rashid ၏ Shariah Law: The Five Things Every Non-Muslim (and Muslim) Should Know
အား ဆီလျော်သလို မြန်မာမှုပြုပါသည်။
Posted in: ဆောင်းပါး , ရှရီယာဥပဒေ , အစ္စလာမ်
ရှရီယာဥပဒေ - မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများနဲ့ မွတ်စလင်မ်မျ...